Makụọ Ime Gị Ray Liotta | Martech Zone
Friday, April 12, 2013 Monday, May 6, 2013 Douglas Karr
Ka anyị na-eche na nkwụsị anyị site na LA ruo San Francisco, Ray Liotta gbagoro na ụgbọ elu ahụ. Ya na ụfọdụ ndị ọrụ ya kparịtara ụka wee soro otu onye ọrụ ibe ya nọdụ ala. Ọ bụ otu n'ime oge ndị ahụ ị na-amaghị ihe ị ga - eme… ị bụ nwoke ahụ ma gaa juo foto? Ma ọ bụ ị na-ahapụ onye ahụ naanị ya n'ihi na ọ nwere ike na-echegbu ndị folks ụbọchị niile. Achọghị m ịbụ nwoke ahụMana abu m nnukwu onye ofufe. M na-ele Goodfellas ọtụtụ ugboro na ihe ọ bụla ọzọ si Ubi nke Nrọ ka Operation Dumbo Drop na-egbu ha Softly.
Abụm nnukwu mmadụ nke mere m ji fụla akwụkwọ na klas mbụ karịa ịpịkọta onye nchịkwa ma mee ka ndị agbata obi m nwee nsogbu. Planegbọ elu ahụ buuru ma Maazị Liotta nọdụrụ ala na 1B na m bụ diagonal na 2A. Marty na Jenn nọdụrụ ala n'azụ ya. Ka anyị na-eche ịpụ, ajụrịrị m nwayọ ma m nwere ike ịmeta foto Maazị Liotta mgbe ọ kwụrụ iji weta ihe na akpa ya. Nzaghachi ya dị ka ọ na-agụ akara site na otu n'ime ọtụtụ fim ya. O lere m anya n’ihu wee sị:
"Ugbu a?! Mba! Chere ruo mgbe anyị batara. ”
Ano m eze nwoke ahụ. M na-ekwu okwu mgbaghara ma ọ bụ ihe nzuzu na m na-enye iko mmanya. Ọ bụ 10AM.
Gbọ elu ahụ dị mma ma Maazị Liotta na-akparịta ụka na Jenn na Marty maka nkeji ole na ole. Mgbe Jenn kwuru na anyị na-ere ahịa, ọ na-ekwu na ọ dị anyị mkpa ịnweta okwu ahụ na fim ọhụrụ ya, Na Iceman. Mgbe ha hụrụ HBO pụrụ iche gbasara Richard Kuklinski, odighi uzo m n’acho ihe nkiri a.
Laghachi n'ụgbọ elu. Maazị Liotta biliri n'ihe dị ka nkeji iri abụọ site na ọdịda wee gafere ụlọ klaasị mbụ na-akparịta ụka ma na-ese foto na ndị folks. Ọ dabere n'akụkụ m gwa m hoo haa na m kwesịrị ime ihe gbasara ibu m… na m ga-anwụ ma ọ bụrụ na anaghị m eme ihe ọ bụla.
“You nwere agadi ọ bụla ị haziri?”
M mumble ụfọdụ.
O wulite n'apata m, susuo m ọnụ na agba. Onye ọ bụla nọ n'ụlọ ahụ na-achị ọchị ma Marty na-ese foto:
Akụkọ a akwụsịghị ebe ahụ, anyị na-ezute ma gwa ya okwu n'akụkụ… ọ na-enwe nkụda mmụọ na njem ya abịabeghị na ndị mmadụ amalitela iru. Anyị nyere iwu ka a limo si Uber na nnukwu ol 'Black Ford Expedition gbagoo. Anyị nyere Maazị Liotta njem ka ọ pụọ n'ọdụ ụgbọ elu. O ji obi ekele kelee anyị mana o kpebiri iwepụ ya site na ịlaghachi na ọdụ. Anyị na-asị ezigbo ma kelee ya ọzọ maka foto ahụ.
Chaị. Kedu ụbọchị!
Marty, mụ na Jenn enweghị ike ịkwụsị ikwu banyere ihe merenụ. N'ikwu nke a, anyị enweghị ike ikwenye otú nzute na isoro Meri Liotta na-ekwurịta okwu bụ ngosipụta nke ihe anyị hụrụ na nnukwu ihuenyo. Ọ nọ n’ihu, kwupụta nghọta ya ma kwuo ihe ọ na-eche. E nweghị iyo… M pụtara na iyo. Abụghị m nnukwu onye ofufe nke Maazị Liotta ọzọ, ana m akwanyere nwoke ahụ ùgwù ma nwee ekele maka ọhụụ ahụ anyị zutere ya.
Enweghị m nzacha ka m na-etolite. Mgbe ndị mmadụ na-ajụ m ajụjụ, ọ na-eju ha anya mgbe ụfọdụ na ịkwụwa aka ọtọ m na-aza. Ọ bụghị na m na-anwa ịkpa ọchị, ma m na-esi n'ụzọ ahụ apụ. Echere m na ọtụtụ mmadụ enwekwaghị ike ikwu ihe ha na-eche. Anyị bi na ndị na-eme ihe ike na-eme ihe ike ebe ndị mmadụ na-agbanye aka gị ma makụọ gị, wee pụọ ma kwuo banyere gị n'azụ gị.
N’èzí ndị ezigbo ndị enyi m, enweghị ọtụtụ ndị na-eche m ihu n’ibu. Obi dị m ụtọ na Mazị Liotta mere… njem a gburu m n'ezie. Anọ m na ụlọ nkwari akụ ahụ na-arịa ọrịa mgbu - na-ede nke a kama ịnọ na San Francisco na-ekpori ndụ dị egwu. Mgbe m laghachi Indy, m na-etinye igwe kwụ otu ebe n’ịgba ịnyịnya ígwè m ma na-aga ibido ịgba kilomita ole na ole gaa na ọfịs anyị. Achọrọ m ime ya ugbua, mana nkwuputa nke Maazi Liotta nyere aka mee ka okwu a sie m ike.
Nabata Ray Liotta gị n'ime.
Anyị niile kwesịrị ịna-akwụwa aka ọtọ. Anyi na-ebi na awa ojoo - na-efe n'ime abis n'ihi na o nweghi onye choro igwa ibe ya eziokwu - agbanyeghi ahu ike anyi, ochichi anyi, ahia anyi na obuna ahia anyi Ọ bụrụ na Maazị Liotta kụziiri m ihe ọ bụla n'ụgbọ elu ahụ, ọ bụ mgbe niile kwuo eziokwu.
Doug dị jụụ. Ndụmọdụ ị ga-ege ntị… Achọpụtara m na oge agabigala n'ịchịkwa mkparịta ụka mụ na gị. Achọrọ m ime nke ahụ… na “na-akpali akpali ihendori”
Akwa post Doug (dị ka ọ dị na mbụ). Gba njem ole na ole gaa na ọfịs gị? You kwagara ebe ọzọ? Ndi ọfịs ahụ kwagara? Ekwenyere m na ọ dị ihe dịka 15 kilomita site na Greenwood ruo na obodo Indy. Etosiri m ịbanye na igwe kwụ otu ebe ọzọ. N'ezie, ị lọtara mgbe egwuregwu Gray Goat kwụsịrị ma lelee igwe kwụ otu ebe. Ekwesiri m inye ọzụzụ maka RAIN na July. Dị ihe dị mkpa ịnwe igwe mara mma iji mee nke ahụ.
Anyị akwagharịghị, Jason. Enwere m igwe kwụ otu ebe ka m nwee ike ịpasa n'okporo ụzọ ọdịnala, wee gbagoo n'ọfịs. Ezi ihe!
Eha! Nke ahụ na-akọwa ya! Anọ m na-agbalị ịchọta njikọ dị n'etiti mkpa mkpọ na ịnyagharị n'ọfịs. Dị jụụ!
Lee ka ọ si dị mma! M na-eme ihere mgbe niile n’ebe ndị a ma ama nọ. Mana gịnị mere? Ha bụ naanị ndị mmadụ, nri! Yay maka unu! Ọ na-ada ka ezigbo agwa!
Mee 6, 2013 na 10: 12 AM
Ọmarịcha ihe ọchị, eziokwu na ngwangwa Douglas. Daalụ maka ịbụ gị. Ana m atụ anya ịmata ezigbo onye ị bụ. Ma, ihe atụ kachasị nke ụdị ndụ ga-abụ ihe gbasara… ịbụ ezigbo onwe gị.
Mee 6, 2013 na 10: 15 AM
Ọtụtụ nwere obi ụtọ @ facebook-100000206689471: disqus!